“गोल्ड डन’ गोरेको पक्राउ हो कि आत्मसमर्पण ? - Arthakoartha.com
“गोल्ड डन’ गोरेको पक्राउ हो कि आत्मसमर्पण ?
काठमाडौे, जेठ ८ । मंगलबार मध्यान्नमा गृहमन्त्रलयले ३३ केजी सुन प्रकरणका नाइके एव सनम शाक्यका हत्याका अभियुक्त गोरेलाई पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्‍यो । तर सुन काण्डका अभियुक्त गोरेले मानव अधिकारकर्मीलाइ लेखेको चिठिबाट गोरेको प्रकाउ हो कि आत्मसमर्पण भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।
गृहमन्त्रालयका सह–सचिव पौडेलले भारतमा रहेका गोरे काठमाडौं आएको सूचना पाएपछि आफूहरूले मंगलवार बिहान ५:३० बजे पक्राउ गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बतृका थिए । पत्रकारका प्रश्न सुन्न इन्कार गरेका सह–सचिव पौडेलले गोरे काठमाडौं आउन लागेको भनेर ३ दिनअगाडि सूचना पाएको र सोहीअनुसार उनलाई विहान पक्राउ गर्न परिचालन भएको पनि जानकारी दिए । तर केही दिन अघि मात्र मानव अधिकारकर्मीलाइ पत्र लेख्दै गोरेले आफु न्यायलयमा उपस्थित हुन चाहेको भन्दै जिवन रक्षाको माग गर्दै पत्र लेखेको भेटिएको छ ।
गोरेले पत्रमा ३३ किलो सुन प्रकरणमा आफूलाई मात्र दोषी देखाई अरु सबै उम्किने प्रयासमा रहेको र विभिन्न व्यक्ति तथा पक्षले ज्यान लिने प्रयास समेत गरेको भन्दै ज्यान जोगाइदिन भन्दै संगठनका ‘महासचिव’ केपी सुवेदीको नाममा पत्र पठाएका छन् । पत्रमा गोरेले आफू अदालतमा आत्मसमर्पण गर्न तयार रहेको त्यसको व्यवस्था मिलाइदिन पनि आग्रह गरेका छन् । गोरे जीवन रक्षाका लागि अनुरोध भनेर पठाएको पत्रमा महासचिव भनिएका केपी सुवेदी नेपाल मानव अधिकार संगठनका १ नम्बर प्रदेशका इञ्चार्ज हुन् ।
गोरे आदालतमा हाजिर २८ जानलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा
गोरेलाई काठमाडौमा सार्वजनिक गरे लग्गतै मोरङ जिल्ला अदालतमा लगियो । अदातलतले गोरेसहित ३० अभियुक्त मध्ये २८ जानलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको एकल इजलासले सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या काण्डमा संलग्न भएको आरोप लागेका ३० अभियुक्तमध्ये २८ जनालाई पुर्पक्षका लागि आज थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । यसैगरी अदालतले एक जनालाई तारेखमा र अर्का एक जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । तारेखमा रिहा हुनेमा प्रहरी जवान अमर थापा छन् भने हवल्दार विष्णु खड्कालाई रु १५ हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
के हो ३३ केजी सुन काण्ड ?
माघ अन्तिम साता युएइबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै आएको तस्करीको साढे ३३ केजी सुन सम्बन्धित व्यक्तिसम्म नपुगी गायव भयो । सुन तस्करीमा संलग्न मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्यासँगै त्यो सुन हराएको पुष्टि भयो । घटनालाई लुकाउन प्रहरीले भूमिका खेलेको भन्दै छानबिनका क्रममा पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गोविन्द निरौला, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिवेश लोहनी, प्रहरी उपरीक्षक विकासराज खनाल, प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रजित केसी, प्रहरी नायब निरीक्षक बालकृष्ण सञ्जेल पक्राउ परिसकेका छन् ।
मञ्जुश्री फाइनान्सको संस्थापक शेयर खरिद गर्ने मंगलवार अन्तिम दिन
नबिल ब्यालेन्स्ड फन्ड–३ को बिक्री खुला
सेयर बजार ओरालो लाग्दा नेप्से ११७०.३४ को विन्दुमा